तपाईका ओठ कालो त छैन ? यी हुन कलेटी हटाउने अचुक उपाय - Everest Dainik - News from Nepal
तपाईका ओठ कालो त छैन ? यी हुन कलेटी हटाउने अचुक उपाय
कोको बटरस् ओठको कालोपन हटाउन कोको बटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । दुई टेबलचम्चा कोको बटर, आधा चिया चम्चा मधु वाक्स लिनुहोस्। उमालेको पानी एउटा भाडामा वाक्स हालेर पगाल्नुहोस्। यसमा कोको बटर हाल्नुहोस्। यो मिश्रणलाइ चिसो भएपछि ब्रसको मद्दतले ओठमा लगाएमा यसले ओठ नरम हुनेछ र कालोपन पनि हट्नेछ।
ट्याग्स: lips shadow